Shandisa mukana (1-8)
Kanda chingwa chako pamusoro pemvura (1)
Dyara mbeu kubva mangwanani kusvikira manheru (6)
Nakidzwa neudiki uchiziva zvauri kuita (9, 10)
11 Kanda* chingwa chako pamusoro pemvura,+ nekuti pashure pemazuva mazhinji uchachiwanazve.+ 2 Ipa mugove vanhu vanomwe kana kuti kunyange vasere,+ nekuti hauzivi dambudziko richaitika panyika. 3 Kana makore akazara nemvura, anodurura mvura panyika; uye kana muti ukawira kumaodzanyemba kana kuchamhembe, pachange pawira muti wacho ndipo pauchange uri. 4 Munhu anotarisa mhepo haazodyari mbeu, uye uya anotarisa makore haazokohwi.+ 5 Sezvo usingazivi kushanda kunoita simba reupenyu mumapfupa emwana ari mudumbu remukadzi ane pamuviri,+ hauziviwo basa raMwari wechokwadi, uyo anoita zvinhu zvese.+ 6 Dyara mbeu yako mangwanani uye usarega ruoko rwako ruchizorora kusvikira manheru;+ nekuti hauzivi kuti ndezvipi zvichabudirira, ichi here kana kuti icho, kana kuti zvese zvichaita zvakanaka. 7 Chiedza chakanaka, uye zvakanaka kuti maziso aone zuva. 8 Nekuti kana zvikaitika kuti munhu ararama makore mazhinji, ngaanakidzwe nawo ese.+ Asi anofanira kuyeuka kuti mazuva erima anogona kunge akawanda; ese anotevera haana zvaanobatsira.+ 9 Fara hako, iwe jaya, uchiri mudiki, uye mwoyo wako ngaufare mumazuva eudiki hwako. Tevera nzira dzemwoyo wako uye enda kwaunotungamirirwa nemaziso ako; asi ziva kuti Mwari wechokwadi achakutongera zvinhu* zvese izvi.+ 10 Saka bvisa zvinotambudza pamwoyo pako, ubvise zvinhu zvinokanganisa muviri wako,* nekuti udiki neupwere hazvina zvazvinobatsira.+
^ Kana kuti “Endesa.”
^ Kana kuti “achaita kuti uzvidavirire pazvinhu.”
^ ChiHeb., “nyama yako.”